बिहीबार, भदौ ३१, २०७८ ज्योति न्यूज डेस्क
वरिष्ठ फिजिसियन डा . राकेश तिवारी
वीरगञ्ज । मानिसको शरीरमा भएको अत्यन्तै संवेदनशिल अंग मध्ये फोक्सो एक हो । अहिले पछिल्लो समयमा दीर्घ रोगीका साथै फोक्सो सम्बन्धी रोगको परीक्षण गराउनेहरुको संख्या पनि बढ्दो थालेको छ । अव्यवस्थित जीवनयापन , खानपान र बढ्दो धूम्रपान सेवन तथा वातावरणीय प्रदूषणकै कारण फोक्सो सम्बन्धि कतिपै रोग मानिसहरूलाई सताउने गरेको छ । शुरुमा केही नहुँदा केही हुँदैन भनेर लापरवाही गर्ने र पछि केही भइसकेपछि पश्चाताप गर्ने हाम्रो स्वभावका कारण पनि फोस्कोमा धेरै किसिमको रोगहरुले आक्रमण गर्ने गरेका छन् । दमा एउटा फोक्सो सम्बन्धी ठूलो रोग हो । फोक्सो सम्बन्धी रोगमा दामा यथार्त श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने पाइन्छ । धूम्रपान , मध्यपान तथा वातावरणीय प्रदूषणबाट सबै भन्दा बढि फोक्सो सम्बन्धि रोग हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न र फोक्सो रोगबाट टाढा रहन विभिन्न तत्वहरुले महत्वूर्ण भूमिका खेलीरहेका हुन्छन् । तर कतिपय अवस्थामा हामी आफैले नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ भने कतिपय अवस्था हाम्रो नियन्त्रण भन्दा पनि बाहिर हुन सक्ने नारायणी अस्पतालमा कार्यरत बरिष्ठ फिजिसियन डा. राकेश तिवारी बताउँछन् । डा. तिवारीका अनुसार जन्मजात समस्या हाम्रो काबुभन्दा बाहिर हुन्छ । तर पनि केही परिवर्तन र जोखिमलाई कम गर्न भने सकिन्छ ।
फोक्सो सम्बन्धी रोगबाट बच्नका लागि डा. तिवारीका सुझावहरु यस प्रकार छन् :
धुमपान, मद्यपान र लागुऔषधको सेवन नगर्ने : फोक्सो सम्बन्धि रोगीलाई धुम्रपान, मद्यपान र लागुऔषधको सेवनले झनै जोखिम निम्त्याउँछ । धुम्रपानसँगै मद्यपान र लागुऔषधको सेवनका कारण फोक्सो सम्बन्धी रोगका अतिरिक्त स्वाश्सप्रशास, डायबिटिज, क्यान्सर, रक्तप्रबाह लगायत अन्य समस्याहरु पनि सृजना हुन सक्छन् । धूम्रपान सेवनले सबै भन्दा बढि असर फोक्सोमा हुने गरेकाेले धूम्रपान सेवन छोड्नु पर्छ। सरकारले चुरोटमा लगाएको उच्च करको साथ महँगो पनि छ, फोक्सोको क्यान्सरले संयुक्त राज्यमा २,००,००० भन्दा बढी मानिसलाई असर गर्छ र धूम्रपान स्पष्टतः यस प्रकारको क्यान्सरको मुख्य कारण हो । नेपालको जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतले धूम्रपान तथा मद्यपानको सेवनले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ ।
चिनीको प्रयोग कम गर्ने : रगतमा चिनीको मात्रा अत्यधिक बढ्नु नै मधुमेह(सुगर) हो। यसलाई चिनी रोग,डाइभिटिज पनि भनिन्छ। यो मोटोपनका कारणले समेत लाग्ने रोग हो। वंशानुगत कारणले समेत सुगर हुने गर्छ। शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा घट्दै जाने र यसले काम नगर्नु पनि सुगर रोग हो। चिनीको अत्यधिक सेवनबाट मधुमेह रोग लाग्छ भनेर सबैलाई अवगत नै भएको कुरा हो । चिनीले तौल पनि वृद्धि गर्छ । तसर्थ अबदेखि र आजैदेखि दैनिक खाने र खानेकुरामा हुने चिनीको मात्रा घटाउन आवश्यक छ । यदि रगतमा सुगरको मात्रा धेरै नै बढेको छ भने इन्सुलिनको प्रयोग समेत गर्नुपर्छ। सुगरको उपचार पनि महँगो छ। केही औषधिहरू मात्रै सस्तो छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरूमै बच्ने उपाय सोच्नुपर्छ। खानपिनमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम गर्ने हो भने सुगरबाट बच्न सकिन्छ। एकैचोटी धेरै नखाने बानी बसाल्नुपर्छ।
हरियो सागसब्जी :-हरेक छाकमा हरियो सागपात समावेश गर्नुपर्छ भनिन्छ । तर, सालको हरेक महिनामा हरियो सागपात पनि त्यती उपयुक्त मानिन्छ । हरियो सागपातमा ब्याक्टेरिया वा किराहरु धेरै हुन सक्दैन । सागपात सेवन गर्दा आँखामा समस्या नहुनु , फोक्सो ,पेट नदुख्ने वा अरु किसिमको समस्या हुन सक्दैन ।
नियमित व्यायाम : प्रातःभ्रमण (मर्निङ्ग वाकमा) जाने, दौडने, डोरी (स्किपिङ्ग) खेल्ने, पिटी खेल्ने, खेल खेल्ने, पौडी खेल्ने, ट्राम्पोलिनमा उफ्रने, टे«किङ्गमा जाने, नाच्ने, योग गर्ने, एरोविक्स, जुम्बा, बैले, सालसा गर्ने, हाइकिङ्ग जाने, बाटामा साइकिल चलाउने, स्टाटिक साइकिल चलाउने, जिम जाने, सिँडी उक्लिने, कम्फुकराँते, उसु खेल्ने, डुङ्गा खियाउने, पानीमा गरिने व्यायामहरू गर्ने, करेसा बारी वा बगैँचाको काममा संलग्न रहने । सुस्त र अल्छी हुनाले फोक्सो सम्बन्धी मात्रै हैन अरु पनि रोगहरुले सहजै समात्छन् । ४० वर्षपछि केही घन्टा फटाफट हिड्दा, साईकल चलाउँदा वा सामान्य गतिविधिमा व्यस्त हुदा फोक्सो स्वस्थ हुन्छ । व्यायायम लगायतका शारीरिक गतिविधिबाट शरीरलाई सक्रिय राख्न सके निरोगी हुनुका साथै शरीर पनि फुर्तीलो हुन्छ ।
(वीरगञ्जस्थित नाराणी अस्पतालमा कार्यरत बरिष्ठ फिजिसियन डा. राकेश तिवारी सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । उहाँसँग परामर्श लिन नारायणी अस्पताल वीरगंजमा सम्पर्क गर्नुहोला ।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८, १०:३२:००